Heather: karazana sy karazana zavamaniry - Zavamaniry zavamaniry mihamitombo - 2019
Famaritana sy sarin'ny karazana heather, ny safidin'ny voninkazo ho an'ny dacha
Heather tsotra - Ny karazam-pita manokana dia i Heather. Ny zavamaniry mitovitovy amin'ny tosi-drà mandritra ny efa-polo taona eo ho eo dia tsy misy dikany firy amin'ny tany sy ny fikarakarana, dia manana karazana ilaina mahasoa. Ny mpamboly sy ny mpamboly dia manintona ny zava-misy fa ny karazana heather dia manana karazany maro ho an'ny zaridaina.
Varotra misy loko maitso
Varotra misy loko maitso ary fotsy fotsy
Karazam-bolo volamena misy ravina volamena
Varotra misy voninkazo roa
Varotra misy voninkazo tsy misy pentina
Heather vulgaris: Ahoana ny fomba fanasokajiana varotra?
Tsiranoka marevaka marevaka mitambolam-bary sy ravina mainty maitso, miaraka amin'ny satroka boribory sy sola mena. Avy amin'ny voninkazo kely, lava, menaka (25 santimetatra) no noforonina. Marihina amin'ny fisian'ny kalsiô lava lava sy ny nimbus maitso maitso.
Ny Heather sy ny karazany dia miavaka amin'ny lokon'ny voninkazo, izay mety fotsy na volomparasy, ary ny lokon'ny ravina dia miovaova amin'ny ash to tan. Nalefa tany Eoropa, Afrika Avaratra, Azia, any Russia mifanaraka amin'ny siansa tandrefana ara-jeografika. Ny toeram-ponenana tsara indrindra dia ala maitso sy alikaola, ary koa sandy sy tundra.
Ny karazan-kazo madinika dia antsoina hoe heather heather. Heather mahazatra dia manana isam-bolana maromaro - Heather mamy, mavokely, hazo ary zaridaina.
Heather garden - Ny varimbazaha hafahafa tsy mitovy, ny lokon'ny ravina, ny voninkazo ary ny felany.
Garden Heather dia manana vondrona telo - karazana varimbazaha, midina sy tsy misy dikany.
ny haizina - Nofintinin'ny Pratt mpamokatra alemana Pratt, 35 cm ny haavony, matevina ny satroboninahitra, mangarahara, ny ravina dia maivana maitso amin'ny fahavaratra, maitso maitso amin'ny ririnina, maniry tsara ny volana Aogositra ka hatramin'ny Oktobra, ny voninkazo dia miorina eo amin'ny tongolobe 15 santimetatra ary manana loko volomparasy izay very Ny fararano, ny lozam-pamokarana mahitsy dia manampy 12-15 sm isan-taona.
Tiany ny tantsaha sy ny tany marefo, satria fiarovana amin'ny ririnina dia ilaina ny manarona ravina maina.
Zava-dehibe izany! Ankoatra ireo singa ivelany, dia sarobidy ny fanasitranana azy, izay ampiasaina ho mpitsabo hemostatic sy antipyretic.
Marleen - onja mahitsy mahitsy mahatratra 40-70 santimetatra, miaraka amin'ny sakany 50 santimetatra, ravina maitso mavana ary marevaka marevaka marevaka, mivoaka ny volana Aogositra ka hatramin'ny volana novambra. Nahazo tany Alemana.
Heather miraviravy - Ny plant afrikanina afrikana, hazo maina 50 santimetatra avo lenta, misy tsiranoka fohy sy kely, hatramin'ny 5 mm long, maitso maitso maitso. Ny felana oval-loko, tsy ny volom-bolo, loko volomparasy mavo, voaangona amin'ny 4 pcs. eo amin'ny fehiny fohy amin'ireo tifitra.
Heather scottish - ravinkazo marevaka mitovitovy hatrany hatramin'ny 1 m. Boky mena-mavo, rantsana matevina, ravina kely, sodina matevina, maitso, tsara tarehy 4 rows.
Fantatrao ve? Tamin'ny vanim-potoana fahiny, nanamboatra zava-pisotro avy amin'ny heather ireo mpikaroka Scottish, tena azo ampitahaina amin'ny fitiavam-pitiavana, ary nanoritra azy tamin'ny kilt.
Anisan'ireo solontenam-be ireo karazana Long white. Ity tsora-kazo madinidra kely iray misy tsokajy mena sy rakotra matevina mena ity, miaraka amin'ny ravin-tery mirefy 30 cm lava maina, fotsy 20-40 cm manga sy fotsy marevaka mifangaro ao amin'ny felam-boninkazo (25-30 cm) 1962.
Ny toetra mampiavaka azy dia azo antsoina hoe fanamafisana ny hafanam-po sy ny fitiavana ny masoandro, ary koa ny fandoavana ny fandotoana ny tany ary ny mouche mialoha ny hatsiaka rehefa avy mangatsiaka kely.
Ny hakanton'ny heather dia ampiasaina amin'ny zaridaina vatosoa, zaridaina heather, rehefa mamorona fanangonan-tsarimihetsika. Ity karazany ity dia mila rano mandriaka, amin'ny toe-javatra sasany dia mety ilaina ny fanonganana.
miavaka Hammondii - Ny voalohany dia nahazo tany Angletera tamin'ny 1850. Io hazo mahitsy mitombo tsikelikely io miaraka amin'ny satroboninahitra somary manify sy ny voninkazo maitso maitso toy ny voninkazo sy voninkazo fotsy, manangona endrika miendrika 20 santimetatra ny endrika fanamiana iray, dia mahatratra haavo 40-70 santimetatra ary 50 santimetatra.
Amin'ny herintaona dia mitombo ny habeny amin'ny 6-8 santimetatra. Ny vanim-potoanan'ny voninkazo dia hatramin'ny Aogositra ka hatramin'ny Septambra, ny androm-piainam-piainana dia hatramin'ny 30 taona.
Glendoik silver - Toe-boribory midadasika iray, solontenan'ny amboadia ho an'ny zaridaina, dia ao anatin'ny tarika misy ravin'olom-borona, mahatratra 20 cm ny haavony, misy 45 cm ny hateviny, miaraka amin'ny sampana lavalava, voninkazo na volomparasy somary volomparasy, mamorona biriky lava. Fotoana fambolena - Septambra-Oktobra.
Jan dekker - 15 santimetatra lavalava, kirany misy alokaloka, 30 santimetatra ny satroboninahitra, misy rantsana avoavo, volony maitso maitso maitso, voninkazo mavokely ary ravina fotsifotsy fotsifotsy, velarin'ny voninkazo - Septambra.
Silver knight - Nahazo ny Sparkes mpihaza anglisy tamin'ny taona 1960, dia ambany tsy misy lalan-kely 20 cm cm, 45 santimetatra eo ho eo, miaraka amin'ny satroboninahitra sarobidy, pincushion, akorandriaka maitso matevina, ravina volombava volomparasy somary mena amin'ny ririnina.
Ny vanim-potoanan'ny famokarana - hatramin'ny Aogositra ka hatramin'ny Septambra. Ny voninkazo dia volomparasy mavokely na mavokely, tena tsotra. Ny halavan'ny amboadia dia 20 santimetatra. Ny voankazo dia tsy mitranga, ary ny fitomboan'ny isan-taona dia eo amin'ny 10 santimetatra. Tiany ny hazavana, tavoahangy mitovitovy, nefa matahotra ny hatsiaka mafy, ka ny ririnina tokony ho rakotra ravinkazo.
Orange queen - manjelanjelatra mamirapiratra mamirapiratra. Mirefy 60 santimetatra ny haavony ary maitso maitso izy io amin'ny fararano, amin'ny faran'ny volana Aogositra dia manjelanjelatra volomparasy sy mamirapiratra, ary amin'ny ririnina dia mivadika ho varahina sy menamena. Ny voninkazo dia manomboka amin'ny aogositra ka hatramin'ny novambra, ny loko voninkazo - fotsy sy mavokely, any anaty akanjo lava.
Ny karazany dia mangatsiaka be sy mangatsiaka ary marefo, maniry tsara ny tany, mihosotra, manasitrana. Ny rantsana tanora amin'ny ririnina dia asaina hanarontsarona amin'ny ravinkazo.
Aurea - kely, be dia be, miadana miadana, mahatratra haavo 40 santimetatra, miaraka amin'ny fanjaitra manify, manoloana ny ravina, izay amin'ny lohataona dia misy volom-bolamena mavo sy volomparasy amin'ny ririnina. Ny voninkazo dia volomparasy maivana, amin'ny felam-bantoka avo be, vanim-potoanan'ny voninkazo - hatramin'ny tapaky ny volana Aogositra ka hatramin'ny Oktobra.
Ny fakan'ny karazany dia lalina, misy karazan-trondro matevina, toy ny tany mahavelona izy ireo, ny tara-masoandro, miaritra tsara ny hafanana, saingy mampidi-doza ny hafanam-be. Ny fandrobana dia tena tsara kokoa amin'ny lohataona.
Zava-dehibe izany! Io karazany io dia sarobidy noho ny voninkazo lava be sy ny zavamaniry misy tantely.
Boskoop - novokarina tany Holland tamin'ny 1967, hazo maina 40 santimetatra. Crohn akaiky, hoditra maina mena, ravina maitso maitso maitso mavo amin'ny lohataona ary mena-ravina amin'ny ririnina, felana mavokely mavokely, mavokely, mavo ary fohy.
Indrindra indrindra ny mari-pahaizana miavaka Beale. Ny kirany manana haavo 30-50 cm, dia manana ravina maitso maitso maitso ary mavokely mavokely marevaka sy terramena misy volom-borona lava be.
Ny karazany dia mila masoandro be dia be, vovon-tany, alaina ampy, fanangonam-bokatra sy ravin-kazo ho an'ny ririnina.
mahafatifaty Alportii. Miparitaka amin'ny taham-pivoarana, matetika ny halavany dia mihoatra ny 50 santimetatra, ny ravina rakotra volomparasy sy volomparasy na voninkazo marevaka dia manome fahatsapana lehibe. Mihoatra ny 60 santimetatra ny haavony, mihamitombo haingana sy mahitsy. Tsy mendri-piderana, fa tia tanimboto mando sy faritra sasatra na semi-shady.
Fantatrao ve? Io karazany io dia tandindon'ny firenena any Norvezy.
Alba plena - Heather tsara tarehy miaraka amin'ny voninkazo roa. Izy io dia miavaka amin'ny haavo kely (eo amin'ny 40 sm) eo ho eo, miaraka amin'ny fahazarana mivantana sy voninkazo fotsy izay mihaingo amin'ny Septambra ka hatramin'ny Oktobra. Ny karazam-pomba mahazatra ho an'ny fanampiana an-kibon-dreny, ary koa ny tany mahavokatra, fasika, ary tsy misy vatosokay.
J.H. Hamilton. Ny endrik'ity karazany ity, izay nentina tany Angletera tamin'ny taona 1935, dia 40 santimetatra ny haavony, 50 santimetatra ny hateviny, satroboninahitra sy ravin-damosina tsara tarehy, manomboka eo amin'ny aloky maitso maitso mangatsiaka amin'ny lohataona ka hatramin'ny volokolo volomparasy amin'ny fararano.
Ny voninkazo koa dia manintona ny saina amin'ny volony sy ny volombava-karine na ny loko volomparasy, mamokatra 20 santimetatra ny felana. Ny faharetan'ny fiainana dia 20 taona.
David Eason - Kofehy vita amin'ny kofehy boribory kely, manana haavo 20 cm, ary 25 santimetatra ny satroboninahitra, sampana maro miakatra, ravinala maitso maitso, voninkazo mavokely maitso, voaangona amin'ny felana fotsifotsy, miposaka amin'ny volana Aogositra-Septambra.
Fritz Kircher. Feno tsofa mitsatoka, 30 santimetatra eo ambonin'ny tany, 45 santimetatra ny diamondra, ary ny rantsana dia manakatra ambony, ny ravina dia maitso tsotra, ny voninkazo dia tsy mipoitra, mena-mavo. Ny vanim-potoanan'ny voninkazo dia Septambra.
minima - Totozy kely miendrika kodiarana kely manana haavo 5 cm ary metatra - 15 cm. Amin'ny lohataona sy ny fahavaratra, ny ravina dia maitso, amin'ny ririnina dia misy loko mena. Ny voninkazo dia mavokely mamiratra, tsy aseho, miaraka amin'ny borosy fohy. Mamboly amin'ny fararano amin'ny fahavaratra.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Famaritana sy sarin'ny karazana heather, ny safidin'ny voninkazo ho an'ny dacha